ActionIQ: Ọgbọ Ntanetị Ndị Ahịa nke Na-esote Iji Gbanwee Ndị Mmadụ, Nkà na ,zụ, na Usoro | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe ị kesara data na ọtụtụ usoro, a Ahịa Data Platform (CDP) bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa. A na-ejikarị usoro eme ihe maka usoro ụlọ ọrụ dị n'ime ma ọ bụ akpaaka… ọ bụghị ikike ịlele ọrụ ma ọ bụ data gafee njem ndị ahịa.
Tupu Platform Data Platform kụrụ ahịa, akụrụngwa dị mkpa iji jikọta nyiwe ndị ọzọ gbochiri a otu ndekọ nke eziokwu ebe onye ọ bụla nọ na nzukọ nwere ike ịhụ ọrụ gburugburu onye ahịa. Ọnọdụ data ndị ahịa dị ka ActionIQ enyere ulo oru aka inweta nghọta ma zaghachi ọtụtụ nsogbu ndị ahịa na-eche ihu.
Ahịa 360 - Unified your data and build a single wide view for your niile ahịa
Ọgụgụ Ndị Ahịa - Nyochaa data gị ma nweta nghọta ọhụrụ site na otu isi iyi nke ọgụgụ isi ndị ahịa
Ahịa Ahụmahụ - Orchestrate ezigbo njem ndị ahịa na ezigbo oge ahụmahụ gafere ọwa gị niile
Ndị ọrụ CDP na-enye ndị na-abụghị teknụzụ ikike site na interface mmekọrịta enyi na enyi maka ịtụle ndị ahịa, nkewa ndị na-ege ntị, na ịkọ omume kachasị mma na-enyere 100% nke data ha aka. Site na data ahụ, ịhazi ahụmịhe na ịme njem 1: 1 ọkaibe na-agafe ahịa niile, CX, na ọwa azụmahịa nwere ike.
Nhazi nke onwe agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ndị ahịa anaghị enwe ụzọ isi ghọta mkpa ndị ahịa na-aga n'ihu. Mwube ihe omuma ihe omuma nke ndi ahia (CDP) iji mee ka data ugwo na nke onye nwe ya site na uzo di iche iche di nkpa na mgbali ndia.
ActionIQ dị n'etiti etiti mgbanwe data na-agbanwe ụzọ ndị ahịa si eche banyere ahụmịhe ndị ahịa, mgbanwe dijitalụ na uru nke data ndị ahịa dịka akụ dị mkpa.
Ha na-etinye uche na idozi nsogbu ịma aka nke ụlọ ọrụ ka enyere ndị otu ike ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa zuru oke n'akụkụ akara aka niile.
ActionIQ na-enyere ụlọ ọrụ G2000 aka site na ijikọ data ahịa nke mbụ ha, na-enye interface dị mfe maka ndị ọrụ azụmaahịa iji nweta nghọta ndị ahịa, ma na-enyere ndị ahịa ahụmịhe aka ịkwafe ọwa niile.
Ndị na-azụ ahịa CDP
Ọnọdụ ala data Platform agbasawo ihe karịrị 100 + ndị na-ere ahịa na-azọrọ na ha bụ CDPs na ọnwa 12 gara aga. N'ikwu eziokwu, enwere CDP ole na ole ebumnuche wuru iji jikọta, nyochaa, ma rụọ ọrụ data ndị ahịa n'oge a na agile.
Nzọụkwụ mbụ ịchọta ihe ngwọta dị mma n'ahịa ahịa ahịa data nke na-eto n'ike n'ike bụ ịghọta ihe Data Platform Ahịa na-adị ma na-eme. ActionIQ edewo a Nduzi Ahia CDP iji chekwaa onwe gị ọnwa nke nyocha na-akụda mmụọ ma nweta eziokwu na ntụgharị ala CDP dị mgbagwoju anya.
Budata CDP Market Guide
ActionIQ Nnabata na Asambodo
Ezubere ihe eji arụ ọrụ nke ActionIQ iji kwado data gbasara data, onye ọrụ na usoro njikwa nchekwa. E wuru ActionIQ site na ala site na iji nche na nzuzo n'uche, yana ntinye na asambodo ndị a.
GDPR - Iwu General Data Protection 2016/679 bụ ụkpụrụ na iwu EU na nchekwa data na nzuzo na European Union na European Economic Area. Ọ na-ekwu maka ịnyefe data nkeonwe na mpụga mpaghara EU na EEA.
CCPA - Iwu nzuzo nzuzo ndị ahịa California bụ iwu steeti emere iji bulie ikike nzuzo na nchekwa ndị ahịa maka ndị bi na California, United States.
NSỌ 2 - ụkpụrụ nnabata nke Ụlọ Akwụkwọ America nke Ndị Akaụntụ Akaụntụ (AICPA). Kpụrụ ahụ kpuchitere ihe dịka nchekwa, iguzosi ike n'ezi ihe, nnweta, nzuzo na nzuzo. A na-eme nyocha SOC 2 site na mpụga, nke atọ na cybersecurity na nnabata, na-anọghị na ndị ọrụ teknụzụ na AICPA.
Nzube Ọta Nzuzo - usoro a ma ama maka ịgbaso data nchekwa data EU mgbe ị na-ebufe data nkeonwe site na European Economic Area (EEA) na United States.
ActionIQ enweghị ngwụcha Ezigbo Nchịkọta Inyocha Oge
ActionIQ's InfiniteCompute na-enye gị ike ijikọ ma jikọọ data ndị ahịa gị niile n'agbanyeghị agbanyeghị isi ma ọ bụ oke. Site na njikọta igbe, InfiniteCompute na-ejikọ ọnụ na ụlọ nkwakọba data, ọdọ mmiri data, na teknụzụ ahịa niile ama ama, site na ntinye faịlụ na ezigbo API na-agba ọsọ. Ihe omuma a na-ejighi edozi, data gụgharia, nnukwu data, data jikọtara-n'agbanyeghị ihe, ActionIQ InfiniteCompute na-eweta ya niile.
Budata akwukwo data enweghi ngwucha
Ntinye aka ActionIQ CDP
ActionIQ na-ejikọ na ngwọta ụlọ ọrụ, nchịkọta, ọgụgụ isi azụmaahịa (BI), ndị ahịa, akụrụngwa data, ndekọ data, ozi ziri ezi, DMP, eCommerce, Email, Mobile, Pagwọ Media, Nhazi, Ahịa, Ọrụ, yana Web / SDK iji mekọrịta data niile n'etiti.
Njikọ ndị e mepụtara gụnyere Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Campaign, Adobe Marketo, Adobe Target, AirShip, Allant, Allorica, Amazon Kinesis, Amazon Redshift, Amazon S3, Apache Hive, Arandell, Baesman, Beeswax, Braze, Cheetah, Criteo, CSV , Domo, Mmụba Di omimi, Mgbasa ozi Facebook, Facebook Instagram, Facebook Messenger, Facebook Whatsapp, Mgbasa ozi Google, Nchịkọta Google, Google BigQuery, Nchekwa igwe ojii Google, Ngosipụta Google & vidiyo 360, Google Youtube, HTTP, Informatica, Iterable, JDBC, JSON, Kafka, KWI, Liveramp, Looker, LS Direct, Luigi, MasterPiece Printers, Merkle Archie, Merkle M1, Merkle RAL, Microsoft Azure, Moloco, Moveable Ink, mParticle, Mulesoft, Optimizely, Oracle Bronto, Oracle Eloqua, Oracle Responsys, Pinterest PowerBI, API izu ike, SailThru, Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Datorama, Salesforce DMP, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud, Segment.io, SFTP, Shopify, Snap, Snowflake, SparkPost, Tableau, Tealium, Teradata,TikTok, Tulip, Twilio, SendGrid, Twitter, YesMail, Zendesk na Zeta Global.
Rịọ ActionIQ Demo
Tags: Adobe nchịkọtaOnye isi Nlekọta AdobeAdobe Mgbasa OziAdobe Marketonwa adobeNgwọta ụlọ ọrụSgbọ eluGburugburuAlloricaKinesis nke AmazonRedshift Amazonamazon s3AnalyticsApache HiveArandellBaesmanBeeswaxỤkwụỌgụgụ isi azụmahịa (BI)cdpcheetahNdị ahịaikpo okwu data ahiaedekọCSVakụrụngwa datadatabaseozi ederededmpdomoDynamic Mmụbaecommerceemailfacebook mgbasa oziFacebook nke Instagramonye ozi facebookFacebook WhatsAppmgbasa ozi googleGoogle AnalyticsGugulu BigQueryNchekwa Google CloudNgosipụta & vidiyo 360 GoogleYouTube YouTubehttpinformaticsaputaJDBCjsonkafkakwiihe ntionye nlereLS DirectLuigiMasterPiece Na-ebi akwụkwọMerkle ArchieMerkle M1Merkle RALmicrosoft azuremobileMolocoInk Na-ebugharịAkụkụMulesoftkachasị mmaOracle Brontookwu eloquaOracle Nzaghachiakwụ ụgwọ mgbasa ozikeonwePinterestIkeezumike apiOgbalasalesAzụmaahịa Ahịa CloudforceAhịa DatoramaDMP ahịasalesforce ahịa ojiisalesforce ahịa ígwé ojiiEre ahịa ọrụ igwe ojiisdkNgalaba.ioSendGridIje oziSFTPụlọ ahịasnapSnowflakeUdochukwutableTealọmteradataTikTokTulipTwilioTwittereeeOnyebuchiZeta Global